Posted by မေအောင် at 12:16 PM
ညီမ October 25, 2008 at 12:50 PM
ပေါ်မလာတာကြာတော့ မမေအောင် ဒီတစ်ဝါတကယ်ကျွတ်သွားပြီလို့ ထင်နေတာ။ အင်း....ထင်တဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့...ဆိုတော့...
Moe Cho Thinn October 25, 2008 at 5:02 PM
အကြံပိုင်တဲ့ ကိုကိုလေးပါလား။ :P
ဖြူစင်တဲံ စိတ်ကောင်းလေးတွေကို လှလှပပ ပေါ်အောင် ရေးသွားတယ်။. အစအဆုံး ဖတ်လို့ သိပ်ကောင်းတယ်။ အဆုံးကတော့ စုံထောက်ဝတ္ထုလိုပဲ။ ဒီလို ဇာတ်သိမ်းမယ် ထင်မထားတော့ ပရိသတ် ခံလိုက်ရတယ်။ hee
PAUK October 25, 2008 at 6:43 PM
၀တ္ထုလေးက အလှည့် အကွက်လေးတွေနဲ့...
တန်ခူး October 25, 2008 at 9:39 PM
စာရေးသူရဲ့ ပညာနော်… ထင်တားတာနဲ့ ဇာတ်သိမ်းတာလေးက မတူတော့ ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာ ပိုပျော်သွားတယ်… မမနွဲ့ တို့ က သွက်ပါ့… ကိုကိုလေးများ မြခက်ကို ဒီလောက်မချစ်ဖူးလားလို့ စိတ်ထဲ စနိုးစနောင့်ဖြစ်တာလေး အဆုံးကျမှ ပြုံးနိုင်တယ်…
ဇနိ October 25, 2008 at 10:41 PM
mgngal October 26, 2008 at 2:22 AM
ကောင်းမှကောင်း ။ အဆုံးသတ်လေး ကောင်းတယ် ။
khaingzm October 26, 2008 at 3:49 AM
မမေအောင် .. ရေးတတ်ပါပေ့ .. အရမ်းကောင်းတယ် .. စာများများရေးပေးပါလား မမရေ ..
sin dan lar October 26, 2008 at 6:04 AM
very cool post!! :))
Yu Wa Yi October 26, 2008 at 6:17 AM
မဇနိလေးက ပိုင်တယ်ကွာ။ ဒါနဲ့ ခြင်မကိုက်ဘူးလား ညဖက်ကြီးကို။
Republic October 26, 2008 at 7:12 AM
မမေအောင် လည်း စာရေးကောင်းတယ်ဗျာ ၊၊ ပို့စ်ထဲ က မမနွဲ့ လို သဘောကောင်းပါစေဗျာ ၊၊
Heartmuseum October 27, 2008 at 3:21 AM
tmn October 27, 2008 at 3:37 PM